कालापानी-लिपुलेक फिर्ता ल्याउँछौं भन्न किन खुट्टा कमाएको ? घाइते र अपाङ्गलाई उपचारका लागि एमाले कार्यालय पठाइदिनु – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २७, २०७८ समय: २:१६:२३
काठमाडौ । प्रधानमन्त्रीवाट हटेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक मंगलवार संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाई राखेका छन् । उनले संसदमा बोल्दै सरकारको आलोचना गरको छन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा उनको टिप्पणी गरेका छन् । उनले द्व न्द्व पीडितलाई सम्मान गरिने भन्ने विषयप्रति टिप्पणी गरेका छन् ।
‘पहिलो कुरो द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिनुस्, तपाईंले बुट्टे खादा ओढाएर द्व न्द्व पीडितलाई अल्मल्याउन खोजेको ?’, ओलीले संसदमा भने, ‘घाइतेहरुको उपचार गराउन भन्नुस् न, घाइतेहरुको शरीरमा भएको गो ली झि क्छु भन्नुस् न । यदि सरकारले सक्दैन भने नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय अहिले थापाथलीमा छ, त्यहाँ पठाइदनिुस् म गर्छु ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले राष्ट्रियताका मु द्दाहरुमा खुट्टा कमाएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । सरकारको साझा कार्यक्रममा कालापानी-लिपुलेकलाई फिर्ता ल्याउने कुरा नगरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए
ओलीले भने, ‘साझा कार्यक्रममा कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछौं किन सक्नुभएन ? यसलाई कालापानी समस्या भनेर राख्नुभयो । के यो समस्या हो ?हाम्रो अभिन्न भू-भाग, पवित्र भू-भाग समस्या हुन्छ रु समस्या समाधान कसरी गर्ने त ? छोडिदियो भने त समाधान होला नि । स्पष्टरूपमा फिर्ता लिन्छौं भन्ने कि समस्या हो समाधान गर्छों भन्ने रु त्यस्तो खुट्टा कमाउनुपर्ने कसले बनायो ?’
उनले थपे, ‘त्यो हाम्रो पवित्र भू-भाग हो, फिर्ता लिनुस् । छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन । सक्नुभएन भने ढेढ वर्ष पर्खिनुस् । हामी आउछौं ।’
Last Updated on: August 11th, 2021 at 2:16 am